သင်၏ MacBook Pro ၏လက်ကောက်ဝတ်ကို Notchmeister | ဖြင့်အလှဆင်ပါ။ ကျွန်တော်က mac ကပါ။
သင်၏ MacBook Pro ၏ notch ကို Notchmeister ဖြင့် အလှဆင်ပါ။
Tony Cortes | | Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ
ရန်သူကို မတိုက်နိုင်ရင် သူနဲ့ပူးပေါင်းပါ။ ဒီတော့ အငြင်းပွားမှုကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားနိုင်မလဲ။ ထစ် သင်၏ တန်ဖိုးကြီး MacBook Pro M1 ၏ စခရင်ပေါ်တွင်၊ ထို့နောက် ၎င်းကို ပျော်ရွှင်ဖွယ်ပုံစံများဖြင့် အလှဆင်ပါ။ လေးရက်တည်းဟူသော ဘဝကို ပျော်မွေ့ပါ။
«notchmeister» MacBook Pro မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ notch တွင် မတူညီသော ရယ်စရာပုံစံများကို ပေါင်းထည့်နိုင်စေမည့် ပျော်စရာအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မိုက်မဲဆဲဖြစ်သော်လည်း အနည်းဆုံး၊ သင်သည် မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အနက်ရောင်ဝင်းဒိုးထဲမှ အသုံးဝင်မှုတစ်ခုကို ယခုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ Apple လက်ပ်တော့အသစ်များ။ ရာသီဥတုဆိုးရင် မျက်နှာကောင်းတယ်။
၎င်းတို့၏ စက်စခရင်တွင် အနက်ရောင် notch ပါရှိခြင်းကို မည်သူမျှ မကြိုက်ကြောင်း ရှင်းပါသည်။ အကယ်၍ iPhone မှဖယ်ရှားပစ်ရန်အတွက် Cupertino ကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်အတော်ကြာဆန္ဒပြနေပါက၊ သူတို့သွား၍ အသစ်တွင်ထည့်ပါ။ MacBook Pro. မင်းက ဟင်းရည်မလိုချင်ဘူး၊ ခွက်နှစ်ခွက်၊ မိုဘိုင်းနဲ့ လက်ပ်တော့ကို ယူသွားလို့။
သင်၏အသစ်စက်စက်နှင့်စျေးကြီးသော MacBook Pro ကိုထုတ်ဝေသည့်အစတွင်သင်၎င်းကိုကြည့်ရှုခြင်းကိုရပ်တန့်မည်မဟုတ်ဘဲ Apple၊ Cuertino နှင့် California တစ်ခုလုံးကိုဆန့်ကျင်သည့်အချက်များနှင့်ပစ်ပေါက်သော်လည်း၊ အမှန်တရားမှာနောက်ဆုံးတွင်သင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ .
ယခု သင့်တွင် ဒေါသကို ပြေပျောက်စေပြီး သင့်ကို ဖြစ်စေမည့် အက်ပလီကေးရှင်းလေးတစ်ခုရှိသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး ပျော်ရွှင်ဖွယ် အထစ်၏ ဒဏ်ရာကို ကျော်လွှားရန်။ Notchmaister ဖြင့် အပျော်သဘောဖြင့် ထစ်ကိုအလှဆင်ပါ။
Notchmeister သည် လုပ်နိုင်စေရန် သေးငယ်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆင်ယင်မွမ်းမံ MacBook Pro အသစ်၏ ဖန်သားပြင်များတွင် ပေါ်လာသည့် ပျော်ရွှင်ဖွယ် အထစ်များကို ရယ်စရာ motifs များဖြင့် ပုံဖော်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်လက်ပ်တော့အသစ်၏ "ထစ်" ကို အပြုသဘောဖြင့် ရင်ဆိုင်လိုပါက ဤအက်ပ်လီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ပြုံးပြလိုက်ပါ။
ဤလျှောက်လွှာကိုအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ အခမဲ့ download (အဲဒါအတွက် ပေးချေဖို့ပဲလိုတယ်) Mac စတိုး Apple
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ » သင်၏ MacBook Pro ၏ notch ကို Notchmeister ဖြင့် အလှဆင်ပါ။
သင့် Mac တွင် macOS Monterey 12.2 beta ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်း
Mac တွင် Twitter မှဗီဒီယိုများဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်း